Maxaa dawooyinka ku qaaliyeeyey dalka Maraykanka? - BBC News Somali
Maxaa dawooyinka ku qaaliyeeyey dalka Maraykanka?
Image caption Bukaan Isbitaal jiifa
Sannado badan ayaa loo haystay shirkadaha Maraykanka ee dawooyinka sameeya kuwo aan "wax la yeeli karin" marka la eego awoodooda iyo saamaynta ay siyaasiyiinta ku leeyihiin,
Laakiin beryahan dambe waxaad moodda in arimuhu is bedeleen.
Bishan horraanteedii ayaa 44 gobol dacwado maxkamadaha kaga oogeen shirkadaha dawooyinka sameeya oo ay ku eedaynayaan in ay shirkadahaasi sannado badan ay keligood qiimaha u jarayeen dawooyinka.
Dhawaanna waxa maamulka Trump shaaciyey in shirkadaha dawooyinka sameeyaa ay ku qasbanyihiin in ay qiimaha dawooyinka ku sheegaan xayaysiisyada ay telefishannada ka baahiyaan.
In hoos loo dhigo qiimaha dawooyinku wuxu ka mid ahaa ballan qaadyadii ololaha doorashada Trump waxaana taageeray xubnaha Congress-ka kaga jira xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga labada ba, walow aanay labada dhinac ku heshiis ahayn sida wax looga qabanayo arinta.
Todobaadkii hore muuqaal laga duubay xildhibaanka Dimuqraadiga ah ee Alexandria Ocasio-Cortez oo waydiinaysa madaxa shirkadda Gilead ee dawooyinka samaysa sababta dawooyinka dawooyinka cudurka HIV inta qof bishii isticmaalaa dalka Australia qiimaheedu yahay $8 halka ee ay Maraykanka uga tahay $ 2000.
"Dadku macno darray ku dhimanayaan" ayay tidhi.
Image caption Ocasio-Cortez: oo su'aalo weydiinaysa madaxa shirkadda Gilead
Qiimha dawooyinka dhakhaatiirtu qorto ee Maraykanka?
Qiimaha dawooyinka dhakhaatiirtu qoraan dalka Maraykanku way ka qaalinsan yihiin dunida inteeda kale, sida lagu sheegay daraasad ay samaysay mu'asasadda Commonwealth.
Ururka Organization for Economic Cooperation and Develipment ayaa ku qiyaasay qiimaha dadka Maraykanku dawooyinka siistaan celcelis ahaan $1,200 sannadii. Taas oo ah ta ugu qaalisan dunida oo dhan.
Kuliyadda Caafimaadka ee Harvard ayaa ku qiysaastay qiimaha qofku siisto sannadkii dawooyinka dhakhtar u qoro dalalka horumaray inta u dhaxaysa $466 ilaa $939.
Isbarbar dhigaas qiimaha dawooyinka Maraykanku waxa kale oo lagu eegay dalalka soo koraya. Halka kansarka dhiigga ku dhaca dawadiisa Gleevec bishii qofka Maraykanka ah kaga baxdo $70,000 dalka Mexico waa $2000 Colombia na waxa weeyi $1100.
Humira oo ah dawo aad u acaana oo lagu daweeyo cudurrada fudud ayaa waxay dalka Switzerland ka tahay $822 halka ay Maraykanka ka tahay $2669.
Dawada macaanka ee Insulin ayaa Canada waxa laga siiyaa $38 Maraykanka na $200.
Image caption Dawada Truvada
Wakaaladda cunnada iyo dawooyinka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FDA ayaa la filayaa in ay ansixiso hab caruurta dhalata lagaga daawayn karo cudur muruqyada ku dhaca oo ilamaha naafayn kara. Habkaas ayaa isna qiimaha uu ku kayaa yahay sannadkii $ 1.5 milyan ilaa $ 5 milyan. Waxaanu wargeyska Washington Post ku tilmaamay ka ugu qaalisan.
Intee awoodi karta dawooyinka qaaliga ah?
Warbixin ay soo saartay wakaaladda Pharmaceutical Research and Manufacturers of America oo ay ku bahoobeen shirkadaha dawooyinka sameeya ee Maraykanka, ayaa lagu sheegtay "in aan qofna" qiimahaa dawooyinka awoodin.
"Qiimahaa caalamiga ah ee la barbar dhigayo qiimaha dawooyinka Maraykanku waa kuwo aan cidina bixin oo xukuumadaha dalalkaasi dejiyeen" ayey tidhi wakaaladdu.
Waxaanay sheegtay in Maraykanku leeyahay barnaamijyo caymis oo dawladeed iyo kuwo gaara oo xaqiiqada marka loo dhaadhacona ay tahay in aan dadku bixin qiimhaa badan ee dawooyinka.
Sida ay wakaaladdu sheegtay qiimahaa la sheegay waxa ku jira qiime dhimista loo sameeyo shirkadaha caymiska ama shirkadaha gaarka ah.
Dhibaatadu waxa weeyi in qiyaastii 27 milyan oo qof oo Maraykan ahi aanu ku jirin caymis, taas oo macnaheedu yahay in ay bixiyaan qiimhaa badan ee daawooyinka iyo isbitaallada.
Xataa dadka caymiska ku jiraa mararka qaarkood ayay lacag dheeri ah bixiyaan sida lagu sheegay daraasado badan mararka qaarkoodna dawooyin ka yar intii loogu talo galay ayay awoodi karaan oo iibsadaan ama dalka dibadiisa ayay u dhoofaan oo isku soo daweeyaan.
Dawooyin la dheegay oon dalka laga helin
Aaron Kasselheim oo ka tirsan kulliyada caafimaadka ee Havard ayaa BBC-da u sheegay in Maraykanku aanu lahayn hannaan lagu xakameeyo qiimaha dawooyinka.
Shirkadaha sameeyaana wuxu yidhi waxay suuqa xuurto ku haysteen tobannaan sanadood waxaanay noqdeen shirkado aan in lala tartamo ogolayn.
Hernandez ayaa sheegtay in marka la barbar dhigo dalal badan Maraykanku aanu lahayn waxyaabo dhiiri gelinaya in la soo geliyo suuqa dawooyin jaban.
"Waligeedba waxa jirtay in aan FDA soo saarin xeerar fasaxaya in dawooyin la dheegay la sameeyo, had iyo goorna shirkadaha ayaa la gorgortaba oo lacago ku bixiya in aan Maraykanka la keenin dawooyinkaa jaban ee la dheegay." ayay tidhi.
Image caption In ka badan 27 milyan oo qof oo Maraykan ah ayaan caymis ku jirin.
Lacagta dawladda oo dad gaar ahi ka macaashaan.
Dad badan oo wax dhaliila ayaa farta ku fiiqa in lacagaha lagu bixiyo cilmi baadhista dawooyinka in ay bixiso dawladdu oo ay siiso jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baadhista.
Tusaale ka mid ahi waxa weeye CAR-T oo ah hab dadka lagu daweeyo hidde sidayaashooda oo wax laga bedelo in ay heshay Jaamacadda Pennsylvania oo ay iibsatay shirkada Novartis oo haatan ku iibinaysa dawadaa $475000.
Markii ay su'aalaha weydiinaysay madaxa shirkada Gilead, ayaa Oscasio-Cortez waxa kale oo ay sheegtay in lacagta dawladda lagu bixiyey cilmi baadhistii lagu helay dawada Truvada eek a hortagga cudurka HIV laakiin qiime badan ay ka taagan tahay Maraykanka.
"Hadii aanu nahay shacabka cashuurta bixiya anagaa soo saarnay dawadan. Lacagtaanu bixinay baa lagu sameeyey oo suurto gelinay la'aanshaha fikirka hal abuurka ee PrEP" ayay tidhi.
" Markaasaa hadana cid gaara la siiyey, in kasta oo ay shacabka dalku leeyihiin halabuurkaa lagu hindisay dawadaa"
Hernandez ayaa sheegtay in ay adagtahay in la kala ogaado xaddiga lacagta dawladdu ku bixiso iyo ta shirkadaha gaarka loo leeyahay ku bixiyaan daraasaadka lagu helo dawooyinka.
" Sida lagu yaqaan shirkadaha dawooyinka sameeya, arintan xog cad lagama hayo. Ilaa inta arimuhu noqonayaan kuwo ban yaal ahna aad bay u adkaan doontaa in dhibaatadan dawooyinka qaaliga ah wax laga qabtaa". ayay tidhi.